"Mystery mushroom" which leaves Xi'an villagers befuddled turns out to be artificial vajayjay
ထူးဆန်းလှသည့် မှိုလိုပစ္စည်းကြောင့် တရုတ်
အထင်ကြီးတဲ့ လင်ဇီးမှတ်နေတာ...နောက်ဆုံးတော့ ...
နှမလက်လျော့ ဖြေပါတော့ အရုပ်ဖြစ်နေပါပေါ့ လား...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လွှင့် သည့် Xi'an ရုပ်မြင်လိုင်းမှ စူးစမ်းလေ့ လာ၊ သိမှတ်စရာ ကဏ္ဍမှ
လျှိူ့ ဝှက်ထူးဆန်းသည့် မှိုတစ်မျိူး ကျေးလက်ဒေသတစ်ခုတွင်တွေ့ ရှိရကြောင်း ဖြင့် ဇွန်လ ၁၇
ရက်နေ့ ကထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ မှုဟာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလှောင်ပြောင်ရယ်မောစရာတစ်ခုအဖြစ်ပြော
ရှန်စီ ပြည်နယ်၏မြို့ တော်အစွန်အဖျားတွင်ရှိသည့် လျူစွန်းဘူ ရွာကလေးမှ ရွာသားများအနေ
ဖြင့် ရေတွင်းတစ်တွင်းတူးရာတွင် မှိုနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆင်တူသည့်အရာတစ်မျိူးတွေ့ ရှိခဲ့ ကြ
လို့ ဒေသခံ ရုပ်သံဌာနသို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ ရာမှာ သတင်းထောက် ရီယွန်ဖန်း အား ထို
ပစ္စည်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့ လာစုံစမ်းရန် အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သည့် ရွာကလေးဆီ
သို့ စေလွှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသည့် ထိုပစ္စည်းအားတွေ့ ရှိရာတွင်ပါဝင်ခဲ့ သည့် ရွာသားတစ်ဦးက
သတင်းထောက်မလေးအား " ကျူပ်တို့ မြေအောက် မီတာ ၈၀ လောက်တူးမိတော့ ဒီ ရှည်မျော
မျော၊ ပျော့ စိစိ၊ အသားစိုင်နဲ့ တူတဲ့ အရာကိုတွေ့ ရတာပါပဲ....
သူ့ မှာ နှာခေါင်းလိုအပေါက်နဲ့ မျက်လုံးလိုအပေါက်တွေပါတယ်ဗျ...ကျူပ်တို့ တော့ ဘာမှန်းကိုမ
သိပါဘူးဗျာ..." လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အခုတော့ အေးအေးလူလူစာတွေပဲဖတ်နေတဲ့ ရွာကအသက် ၈၀ ရှိတဲ့ အဘတောင်သူ့ ဘ၀တစ်
လျှောက်လုံး ဒီလိုပစ္စည်းမျိူးတစ်ခါမှ မတွေ့ ဖူးဘူးလို့ ပြောနေတယ်ဗျ လို့ ထိုရွာသားကဆိုခဲ့ ပါ
သတင်းထောက်မလေး ရီ ကထိုလျှိူ့ ဝှက်ဆန်းကြည်ပစ္စည်းအား ကင်မရာဖြင့် အနီးကပ်ရိုက်ကူး
မှတ်တမ်းတင်ကာ " ဒီမှာတော့ ကျွန်မတို့ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ဒီပစ္စည်းက ဟိုဖက်သည်ဖက်ထိပ်နှစ်
ဖက်စလုံး ခေါင်းပါတဲ့ မှိုတစ်မျိူး ပါပဲ...
ဒီဖက်အခြမ်းမှာတော့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံနဲ့ ပိုတူတာကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်..တစ်ခြားဖက်မှာတော့ 
အပေါက်သေးပြီး တစ်ဖက်ခြမ်းအထိရောက်အောင် တိုးလျှိူပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်....ဒီပစ္စည်း
ကတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ အသားတုံး၊ အသားစ တစ်ခုနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်..." လို့ 
ဒီအကြောင်းကို ၎င်းအနေဖြင့် အင်တာနက်တွင် သုတေသနပြုလေ့ လာခဲ့ ရာတွင် တိုင်းဆွေ ဟု
ခေါ်သည့် လင်ဇီးမှိုတစ်မျိူးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရှိရတယ်လို့ အဆိုပါရွာသားကဆိုပါတယ်...
တိုင်းဆွေ ဆိုဟာတရုတ်ရိုးရားနက္ခတ်တာရာဇယားအရ နတ်စစ်သူကြီး ၆၀ ကိုညွှန်းပါတယ်တဲ့ ..
သတင်းထောက်မလေး ရီ ကလည်းမဆိုင်းမတွပဲ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေ့ လာမှုအရ ထိုလင်ဇီးမှိုမျိူး
ဟာ ရှန်စီ ဒေသမှာများသောအားဖြင့် တွေ့ ရပြီး မြေအောက်ခပ်နက်နက်မှာပေါက်ရောက်တာမို့ 
တရုတ်ဧကရာဇ် ချင်ရှီဟွမ်း လျှိူ့ ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အသက်ရှည်ဆေးကိုရှာဖွေတော့ သူဟာ ဒီ
လင်ဇီးမှိုကို တွေ့ ရှိခဲ့ တာလို့ သူမက ခပ်ကြွားကြွားလေးဆိုခဲ့ ပါတယ်....
ဒါပေမယ့် အကြားအမြင်ဗဟုသုတကြွယ်တဲ့ ၊ မျက်စေ့ လျင်တဲ့ သူတွေကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ က
ထုတ်လွှင့် သည့် ထိုအစီအစဉ်ကိုမြင်တာနှင့် ထိုပစ္စည်းဟာ အမျိူးသားများ လိင်စိတ်ဖြေသည့် 
အမျီူးသမီးလိင်အင်္ဂါနှစ်မျိူးစလုံးတစ်ဖက်စီတွင် ဖန်တီးထားသည့် လိင်တူရာဘာရုပ်သာဖြစ်
ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ဒါကြောင့် လည်းသူတို့ တရုတ်ပြည်မှာတော့ ထိုပစ္စည်းဟာ ဇနီးမယားထံမှ လိုချင်တာမရသည့် 
အမျိူးသားများ အသုံးပြုသည့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ရှုလေ့ 
အဆိုပါ သတင်းသုံးသပ်ချက်ထုတ်လွှင့် မှုဟာ နေ့ ချင်းညချင်း မျှဝေတင်ပြသည့် ဆိုက်ဒ်များ
ကြောင့် ကြည့် ရှုသူ၊ အကြိမ်ပေါင်းသန်းနှင့် ချီပြီး ကျော်ကြားသွားပါတယ်....
နောက်တစ်နေ့ မှာတော့ မရှုမလှအရှက်ရခဲ့ တဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်ဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ အင်တာနက်စာ
မျက်နှာမှာ မှားယွင်းကြောင်းတောင်းပန်စာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ငယ်ရွယ်နုနယ်ကာအတွေ့ အကြုံ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးသေးသည့် သတင်းထောက်
လေးတစ်ဦးကြောင့် ကြည့် ရှုသူအများ ရယ်မောလှောင်ပြောင်စရာဖြစ်ခဲ့ ရပါကြောင်း၊ အဆိုပါ
သတင်းတင်ပြချက်ကြောင့် ပြည်သူအများ စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်ခဲ့ ရမည်ဆိုပါက ဝေဖန်၊အ
ကြံပေးမှုများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ဤနေရာမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါ
ကြောင်း၊ သတိလွတ်ကင်း ချွတ်ချော်ခဲ့ မှုအတွက်ခွင့် လွှတ်ပါစေကြောင်းတောင်းပန်အပ်ပါ
သည် လို့ တင်ပြထားပါတယ်...
ခမျာ ငယ်သေးတော့ လောကီအရေးအတွေ့ အကြုံနည်းသေးတာမို့ ခွင့် လွှတ်ကြပါကုန်...
Xi'an Up Close 《西安零距离》, an investigative journalism programme which airs on Xi'an TV, has becomeanational laughing stock after airingareport on June 17 ona"mystery mushroom" which was discovered by villagers inarural part of the city.
Residents of the Liucunbu village on the outskirts of the capital of the Shaanxi province say they came acrossastrange fungi-like object as they hit bedrock while drillinganew well. The perplexed villagers decided to call up their local TV station for help, which sent intrepid reporter Ye Yunfeng to their sleepy little hamlet to get down to the bottom of things.
One villager who was there during the fateful discovery of the unidentified object tells the reporter, "When we dug down to about 80m deep, we fished out this long, fleshy object. It's gotanose and an eye, but we have no idea what it is!"
"Even our 80-year-old neighbour here says he has never seen anything like this before," he adds.
Reporter Ye then begins to describe the curious object as the camera pans in on it. "As we can all see, this looks likeatype of fungus, on both ends of which you'll find mushroom heads."
Without skippingabeat, reporter Ye chimes in with her own research, saying this type of lingzhi is generally found in the Shaanxi region deep underground and is hence rarely seen. "When the Emperor Qin Shi Huang was on the hunt for the secret to longevity," she elucidates, "it is said he discovered this lingzhi was the answer."Eagle-eyed viewers who saw the report on Sunday immediately identified the mystery mushroom asadouble-headed masturbation toy with an artificial vagina on one side and an artificial anus on the other. Yes, you read that right, it wasajack-off aid that some guy used to spank his monkey when he wasn't getting it from his wife.
Overnight, the video of the news report went viral on the Internet, chalking upafew million views across multiple video-sharing sites.
The next day, the embarrassed TV show issued the following apology on its Sina Weibo profile:
Posted by peter kyaw | at 2:51 AM |
Labels: news: shanghiite.com
အပန်းဖြေစရာ၊ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ... အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပ...
The Stoning of Soraya... အခုတစ်လော ဖေ့ စ်ဘွတ်မှာတ...
Hu Jintao Bends Over to Pick Up National Flag at G...
Varieties of Photos....
The breathtaking landscape pictures so stunning th...
အပန်းဖြေစရာ၊ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ...အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ...
အပန်းဖြေစရာ၊ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ...အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပံ...
Meet the cruise liner for ships! Massive carrier c...
Small Businesses of Nairobi
"Mystery mushroom" which leaves Xi'an villagers be...
Maid accused of serving tea laced with urine to em...
Topless artist on Thailand's Got Talent sparks out...
ငါတို့ နိုင်ငံ.... ဖေ့ စ်ဘွတ်မှာတွေ့ မိတဲ့ စာသားမျ...
Canada & America Need A Leader Like This!
He is ugly! World's greatest 'gurner' offers £10,0...
Careful you don't nod off! Highline walker decides...
Myanmar fossil find turns human history on its hea...
Swearing is the 'hardest habit to break'
These Dogs Are Real Friends